Macluumaad | Radio Himilo | Page 3
Home / Macluumaad (page 3)
Mahad Mohamed August 23, 2020
Himilo – Iyada oo dhacdo kasta ay la timaado marmarsiiyo, hadana waxaa wali jira dhacdooyin aan xalkooda laga sal-gaarin jeer iyo maanta tiiyoo aragtiyo badan lasoo bandhigo. Maqnaanshaha diyaaradeed ama in la waayo waa jaad kamid ah dhacdooyinka aan xalkooda ...
Wax ka ogow faa’iidooyinka laga helo qaraha/xabxabka
Mahad Mohamed August 22, 2020
Himilo – Qaraha illaa hadda waa qudradaha ugu awoodda badan ee jirka dawo u ah. faa’iidooyinka layaabka leh ee Qaraha waxay laga billaabo maskaxda illaa unugyada hoose ee jirka u tahay muhiim. Haddaba halkan waxaan kuugu sheegi karnaa siddeed faa’iido ...
Mahad Mohamed August 19, 2020
Himilo – Aragga kolonyo Shinni ah oo hareerahaada ka gunuunacaysa waxay ku filan tahay inay kugu rido argagax, hayeeshe hal qoys oo Shiinees ah ayaa gurigooda kula noolaa muddo 15 sanno ah. Waxay xattaa ka guran jireen malabka iyaga oo ...
Shan cunno ku yareey cayilka calooshaada
Mahad Mohamed August 18, 2020
Himilo – Waxaa jira dhibaatooyin ay badi ka cawdaan da’da culus jir ahaan. Dunida inta gaajada ka cabata ayaa ka badan inta culeyska iyo cayilka ka cabata. Si taas hadaba xal muuqda loogu helo ayaa waxaa la soo ogaaday inay ...
Halkee ayuu ku yaallaa matxafka lagu keydiyo xusuusta xiriirrada go’ay
Mahad Mohamed August 17, 2020
Himilo – Matxafka Xiriirada Go’ay wuxuu kamid yahay goobaha si la yaabka leh loogu dalxiiska tago caalamka. Halkan, dadka imaanaya waxay u riyaaqaan daawashada dhammaan nuucyada sheekooyinka iyo agabyada xusuusashada leh oo ay ku deeqaan dadka qalbi-jabku soo gaaro ee ...
Mahad Mohamed August 16, 2020
Himilo – Baamiyuhu wuxuu ka mid yahay Geedo Daaweedyada Cilmibaarista lagu sameeyay, wuxuuna leeyahay Faa’idooyinkaan soo socdo:- SONKORTA/MACAANKA:- Baamiyuhu wuxuu ugu horeeyaa Geedaha lagu daaweeyo Xanuunka Macaanka, Cilmibaarayaal tiro badan ayaa Geedkaan Xoogga saaray si ay uga Salgaaraan qaabka uu ...
Wax ka ogow faa’iidooyinka laga helo cunista Sabiibka
Mahad Mohamed August 15, 2020
Himilo – Waxaa jira faa’iidooyin caafimaad oo laga helo Sabiibka. Haddaba halkan hoose ka eeg faa’iidooyinka laga tilmaamo oo aan idin qoddobeynay: 1. Wuxuu daweeyaa calool-fuurka. 2. Wuxuu sare u qaadaa miisaanka qofka – culeyska. Waxaana ku jira maadooyinka protein ...
Masjid hoy u fidinaya darbi-jiifta UK
Himilo – Bilihii lasoo dhaafay Muslimiinta UK ayaa horboodaya dadaallo lagu kaalmeynayo danyarta iyo qoysaska ayaanka liita kuwaas oo xanuunka Covid-19 uu noloshooda saameyn ku reebay. Hayeeshe, Masjid ku yaalla waqooyi bari England ayaa tallaab weyn horay uga sii qaadaya ...
Mahad Mohamed August 12, 2020
Himilo – Ku dhawaad 1.8 Bilyan oo dhallinayaro ah oo da’dooda u dhaxayso 10 illaa 24 jir ayaa ku nool caalamka. Waa tiradii ugu badneyd ee da’yar ah. Si kasta, kala bar carruurta iyo qaangaarka ayaan helin xirfadaha akhrinta aas-aasiga ...
Mahad Mohamed August 10, 2020
Kaabad ama buundo cusub oo laga dhisay waddanka Shiinaha ayaa soo jiidanaysa indhaha dadyowgaas. Waxaana sheekadeedu ay sameysay hadal-heyn qaran gudaha Shiinaha. Sababta oo ah waxaa laga dul dhisay guri dherer ahaan u dhuuban oo ninkii lahaa uu iska diiday ...